Madaxwayne Farmaajo iyo Xeer ilaaliyaha Qatar oo maalin kahor kulan qarsoodi ah ku yeeshay Nairobi - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Madaxwayne Farmaajo iyo Xeer ilaaliyaha Qatar oo maalin kahor kulan qarsoodi ah ku yeeshay Nairobi
November 16, 2019 Duceysane262
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay kulan qarsoodi ahaa oo magaalada Nairobi ay ku yeesheen Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Qatar, kulankan ayaa dhacay maalin ka hor, inta uusan Madaxweyne Farmaajo ka soo tagin Nairobi.
Madaxweyne Farmaajo iyo Dr. Ali bin Fetais Al Marri ayaa iska wada hadlay xaalada labada dal, xiriirkooda, iyagoo isla gartay in labada dal ay iska kaashadaan xoojinta shuruucda iyo la dagaalanka musuq maasuqa.
Kulanka waxaa sidoo kale goob joog ka ahaa safiirka xukuumadda Doxa u fadhiya waddanka Kenya, kaasoo lahaa qaban qaabada isu keenida labada Mas’uul, sida ay qortay Warbaahinta dalka Qatar.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa qarisay kulanka, iyadoo qeybtooda Warfaafinta aysan Saxaafada u soo bandhigin kulanka magaalada Nairobi ku dhex maray Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Dr. Ali bin Fetais Al Marri maalin ka hor.
Dowladda Qadar ayaa safka hore kaga jirta wadamada ugu dhow ee taageera kala duwan siiya maamulka uu Hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo, iyadoo ka taageerta dhinacyada Maaliyada iyo dhismaha Ciidamada, waxaana ugu danbeysay Saanadii Ciidan iyo gaadiidkii dagaal ee dhawaan ay dowladda ku wareejisay.
Al-shabaab oo dib u hantay Toora toorow
January 14, 2020 Duceysane
Ciidamada Booliska oo Howlgalo ka sameeyey Xaafadaha Muqdisho